Ciidamo Mareykan iyo Bangaraaf ah oo Markale ku Hungoobay in ay qabsadaan degmada Awdheegle.
Friday January 04, 2019 - 20:29:33 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Ciidamo huwan ah ayaa markale ku fashilmay isku day ay ku doonayeen in ay ku qabsadeen mid kamida degmooyinka gobolka Sh/hoose.
Wararka ka imaanaya degmada Awdheegle ayaa sheegaya in dagaallo culus ay xalay saqdii dhexe ku dhaxmareen ciidamada Al Shabaab iyo kuwa soo duulayaasha Mareykanka oo ay la socdeen maleeshiyaad dabadhilifyo Soomaali ah.
Ciidamo aad u hubeysan oo katirsan oo katirsan Al Shabaab ayaa la sheegay in ay si adag uga hor tageen weerarka ay maleeshiyaadka Bangaraafta iyo ciidamada Mareykanka ku qaadeen degmada Awdheegle, dadka deegaanka ayaa sheegay in ciidamada hawanta ah lagu qasbay in ay ka baqa cararaan magaalada.
Diyaaradaha Drone-ka Mareykanka ayaa dhowr gantaal ku riday degmada Awdhgeele balse lamasoo sheegin wax khasaara ah oo ka dhashay duqeyntaasi cadowtooyo, saaka markii uu waagu baryay ayaa goobihii lagu dagaallamay lagu arkay raadad muujinayay khasaara gaaray ciidamada cadowga ah sida dhiig ku daadsanaa goobta iyo faashado dhiig leh oo ay ka carareen.
Ma ahan markii ugu horraysay oo ay ciidamo American iyo Soomaali ah weerar ku qaadaan degmada Awdhgeele oo kamid ah degmooyinka gobolka Sh/Hoose ee shareecada islaamka lagu mamaamulo waxaana xusid mudan in dhammaan isku dayadaasi guul darro kusoo idlaadeen.